မြန်မာဘရူဝါရီလီမိတက် ကရုဏာရှေးရှုမြန်မာ မှုမှ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲလူနာများကို မကွေးတွင် - Yangon Media Group
မြန်မာဘရူဝါရီလီမိတက် ကရုဏာရှေးရှုမြန်မာ မှုမှ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲလူနာများကို မကွေးတွင်
မကွေး၊ နိုဝင်ဘာ ၄- ကျန်းမာရေး နှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ ပံ့ပိုးကူညီမှု၊ မြန်မာဘရူဝါရီလီမိတက်၏ ကရုဏာရှေးရှုမြန်မာမှုနှင့်Janpan Heart International Medical Volunteers Organization တို့ပူး ပေါင်း၍ (၇) ကြိမ်မြောက် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ ကလေးငယ်များ အား မကွေးမြို့၊ အထွေထွေရောဂါ ကုပြည်သူ့ဆေးရုံ ကြီးတွင် နိုဝင်ဘာ ၆ ရက်မှ ၉ ရက်အထိ အခမဲ့ခွဲစိတ် ကုသပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“”ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ် အတွက် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ၊ ကလေးငယ် ၆၀ ကနေ ၇၀ အတွင်း ကို လေးရက်အတွင်းအပြီး ခွဲစိတ် ကုသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခု မကွေးမြို့၊ လေးထပ်ကျောင်းတိုက် ရှိ သီတဂူမြင့်မိုရ်စံစက္ခုဒါနဆေးရုံ မှာတော့ လူနာတွေရဲ့တည်းခိုဆောင် အနေနဲ့ထားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူနာ ၆၀ ကျော် ၇၀ ကို နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်မှစပြီး ဆေးစစ်ပါမယ်။ နို ဝင်ဘာ ၆ ရက်တနင်္လာနေ့ကစပြီး ခွဲစိတ်ကုသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူနာ တွေကို ခရီးစရိတ်ကအစ ဒီမှာတည်း ခိုနေစဉ်အတွင်းစရိတ် နံနက်စာ၊ နေ့ လယ်စာ၊ ညစာ ပြီးတော့ ခွဲစိတ်ကုသစရိတ်၊ ခွဲစိတ်ခန်းကြေး၊ ဆေးဖိုးဝါးခ အကုန်လုံး ကျွန်တော်တို့ဘက်က တာဝန်ယူပြီးတော့ ကုသိုလ်ဖြစ်ခွဲစိတ် ကုသပေးတာဖြစ်ပါတယ်”” ဟု မြန်မာ ဘရူဝါရီလီမိတက် Corporate Communications Manager ကိုမိုးဇော်ကပြောသည်။
အဆိုပါ ပရဟိတအဖွဲ့အနေ ဖြင့် နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲ၊ ကလေးငယ်များ အခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသ ပေးမှုကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး မျက်နှာ နှင့် မေးရိုးဌာနတွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးတွင် လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တို့ တွင် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမျက် နှာနှင့် မေးရိုးဌာနတွင်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မန္တလေးကလေး ဆေးရုံကြီးတွင်လည်းကောင်း အသီး သီးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်ကွဲဝေဒနာရှင်ကလေးငယ် စုစုပေါင်း ၆၀၂ ဦးအား အောင်မြင် စွာ ခွဲစိတ်ကုသပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
ပြင်ဦးလွင်တွင် ပန်းစိုက်တောင်သူ လျော့နည်းလာခြင်း နှင့်ပန်းဈေးကွက်ပျက် လာခြင်းတို့ကြောင့??
မြဝတီ-ကော့ကရိ တ်အမြန် လမ်းတွင် မော်တော်ယာဉ် များမကြာ ခဏတိမ်းမှောက်နေသဖြင့် ဂျပန်အင်ဂျင်နီ??
”ပြီးပြီးရော လုပ်ပြီးတော့ ပရိသတ်ရှေ့ကို မချပြချင်ဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာလည်း နောင်တရမယ့် အလုပ်မျိ
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည့် စစ်ဘေးရှောင်များကို ထိုင်းပညာရှင်များက သြဂဲနစ် ?
မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အမြန်လမ်းတွင် ယာဉ်နှစ်စီးတိုက်၊ ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးသေဆုံး
”တော်ရိလျော်ရိနဲ့ အချိတ်အဆက်မရှိတဲ့ဇာတ်ညွှန်းဆိုရင် ဇာတ်ကားမကောင်းနိုင်ဘူး”
ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်ကြီး – သံတောင် ကားလမ်းအဆင်း ဒိုင်နာ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး တိမ်းမှောက်၊ ယာဉ်